Home News Fadeexada Kheyre ee doorashada Madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo si cad loo...
Fadeexada Kheyre ee doorashada Madaxtinimo ee Koonfur Galbeed oo si cad loo ogaaday
Sida ay MOL shaacisay waxaa uu dagaal aan waxba la’isula harin, oo kuraas la isla dhacay uu ka dhacay golaha baarlamaanka maamulka Koonfur Galbeed.
Dagaalkan ayaa sida la sheegay ka dhashay kaddib markii ay xubnaha baarlamaanka ku murmeen ansixita gudiga doorashada.
Dhawaan ayey ahayd markii ay inta badan guddigii hore ee doorashada is wada casileen iyaga oo u sababeeyey faragalin qaawan oo ay ku hayso xukumadda u hoggaamiyo Ra’iisul Wasaare Xassan Cali Kheyre.
Hadaba maxaa laga fahmi karaa dagaalka barlamaanka Baydhabo ka dhacay?
Xubnaha ku dagaalamay golaha baarlamaanka Koonfur Galbeed waxa ay direen farriin ah in wali xukumadda aysan ka waan toobin tuhunka iyo dareenka xun ay bulshada maamulkaas ka muujiyeen faragalinta.
Sida ay ilo xog ogaal ah MOL u xaqiijiyeen, baarlamaanka isu gacan qaaday shalay ay inta badan ka cabanayey faragalinta xukuumadda Xassan Cali Kheyre ay ku hayso arrimahooda masiiriga ah.
Wali ma cadda in sanadkan doorasho lagu wada qanco ay ka dhici doonto Baydhabo maadama xukumadda ay weli qas ka wado doorashada oo ay dooneyso in musharaxiinta ay wadato ku soo baxaan.
Previous articleCiidanka Kenya oo laaluush ka qaatay shabaab una fududeeyay weeraro
Next articleSomaliland oo soodhaweysay cunaqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya mudada lagu kordhiyay
Imbigathi Cusub oo Somalia loo wado iyo Nairobi oo shir looga...
Mareykanka oo War Kasoo Saaray Duqeyn uu Ka Fuliyay Maalintii Ciida...